Sida loo xadido waxyaabaha loo dirayo Google Chromecast | Androidsis
Waxay noqotay cunsur muhiim u ah rabitaanka isku xirka TV-ga iyo Internetka, helitaanka barnaamijyo badan, oo ay ku jiraan kuwa ugu badan ee la isticmaalay, kuwa awood u leh daawashada waxyaabaha socda. Google Chromecast oo leh jiilkeeda afraad waxay qaadaysaa tallaabo muhiim ah, gaar ahaan marka lagu daro kontoroolka fog si loo hagaajiyo khibrada isticmaalaha.
Iyadoo Chromecast telefishanka uu noqonayo TV-ga Android, iyada oo marin loo helayo barnaamijyo kala duwan oo horay loogu sii rakibay warshadda, in badan oo ka mid ahi muhiim u yihiin nolol maalmeedkeenna. Adeegyada sida Netflix, HBO iyo kuwa kale ayaa joogi doona iyada oo aan loo baahnayn inaad rakibtid markii aad qalabka ka bilowdo qolkaaga fadhiga.
Google Chromecast waxaa lagu shaqeyn karaa taleefanka gacanta inkasta oo uu la socdo qalab laga hago, si qof kasta oo qoyska ka tirsan uu qalab ugu maareyn karo hadduu doono Haddii aad rabto inaad hesho xakameyn buuxda waxaa ugu wanaagsan in la xadido waxyaabaha loo dirayo Chromecast, waa lagama maarmaan hadaad daawaneyso taxane ama filim.
Haddii dadka kale leeyihiin Google Home waxay awoodi doonaan inay maareeyaan Google Chromecast, waxaas oo dhan horey ugu hoos jiray qaabeyn aasaasi ah oo lagama maarmaan u ah bilowgii. Laakiin tan waa la xadidi karaa wakhti kasta, kaliya adoo galaya goobaha Chromecast iyo beddelida halbeegga.
Si loo xadido waxyaabaha loo dirayo Google Chromecast waa inaad ku sameysaa waxyaabaha soo socda aaladda:
Soo gal dejinta Google Chrome
Markaad gudaha gasho, raadso ikhtiyaarka «Nidaamka» oo guji dir
Xullo "Marna", marna qofna bii'ada isku badalin Google Home awood uma yeelan doono inuu soo diro nuxurka uuna beddelo waxaad daawaneysid xilligaas, gaar ahaan si uusan u xaddidnayn haddii aad daawaneysid taxanaha aad ugu jeceshahay, filim ama dokumentari ah
Ikhtiyaar kale oo xiise leh ayaa ah "Inta nuxurka la dirayo", tan waa la oggol yahay haddii aad ku shaqeyneyso Chromecast oo aadan rabin cidna inay maamusho inta aad ku sameyneyso qalabka fog ama taleefanka.
Google Chromecast iyada oo loo marayo dejimaha ayaa kuu oggolaanaya inaad isku hagaajiso qaar ka mid ah xuduudaha muhiimka ah, oo ay ku jiraan xakameynta waalidka iyo xulashooyinka kale ee gudaha ee qalabka. Chromecast sidoo kale waxay kuu oggolaanaysaa inaad ku beddesho badhanka kontoroolka durugsan Google TV, waad sameyn kartaa ka dib casharkaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo xadido waxyaabaha loo dirayo Google Chromecast
Maarso 23 waxay noqon doontaa taariikhda la sii deyn doono OnePlus 9 iyo OnePlus Watch